कस्टम ट्रेडिंग कार्ड - Print Peppermint
घर / कस्टम ट्रेडिंग कार्डहरू
कस्टम ट्रेडिंग कार्डहरू
फाइल मेटाउँदै, कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस्...
अनुकुल फ्यान वा ग्राहक अनुकूलन ट्रेडिंग कार्डको साथ सिर्जना गर्नुहोस्। चाहे तपाइँ तपाइँलाई तपाइँको बेसबल टीम, खेल टोली, घरपालुवा जनावर, व्यवसाय, वा एक gag को रूप मा चाहिन्छ ... तिनीहरू प्यारा र बरु अनौंठो प्रोमोशनल प्रिन्ट पीस हुन्।
प्रीमियम स्टक र फिनिश
कम क्वाटी २ 25 मा सुरू
बहु सेट छूट
डिजाइन सेवाहरू उपलब्ध छन्
श्रेणी: बजार सामग्री
तपाईंको विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्:
संयुक्त राज्य अमेरिका नि: शुल्क शिपिंग ($ 50 भन्दा बढी)
नि: शुल्कका लागि हात-प्रमाणित प्रमाणहरू
ट्रेडिंग कार्ड प्रिन्टिंग
के तपाई नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईको ब्यापार बढाउन चाहानुहुन्छ? हाम्रो कस्टम ट्रेडिंग कार्डहरूले तपाईंलाई त्यस्तै गर्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो ट्रेडिंग कार्डहरूको सुन्दर कुरा के हो भने ती विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै निजीकृत कार्डहरू, पाल्तु जनावर कार्डहरू, बेसबल, हक्की, बास्केटबल वा फुटबल, वा व्यवसाय कार्डहरू जस्ता खेलकुदका लागि कार्डहरू। तपाईं कुनै विशेष कार्ड तपाईंको लागि डिजाइन गरिएको प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
कुनै अधिक सुस्त क्षणहरू जब तपाईं बाहिर जानुहुन्छ! तपाईं यी कार्डहरूलाई मित्रहरू, परिवारका सदस्यहरू, र अन्य सम्भावित ग्राहकहरूलाई पास गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जब तपाईं सम्मेलनहरू र ट्रेड शो जस्ता घटनाहरूको लागि बाहिर जानुहुन्छ। तपाइँको ब्रान्ड वा व्यवसाय मा नयाँ ग्राहकहरु को आकर्षित गर्न कहिल्यै सजिलो भएको छैन!
हाम्रो प्रीमियम ट्रेडिंग कार्डहरूको के?
हामी हाम्रो पूर्ण र custom्ग कस्टम ट्रेडिंग कार्डहरू प्रीमियम २. by बाट card. card कार्डस्टकमा प्रिन्ट गर्दछौं जुन धेरै प्रिन्टिंग विकल्पहरूको साथ आउँदछ। एक विकल्प छनौट गर्नुहोस् र तपाईंको ट्रेडिंग कार्ड पप बनाउनुहोस् जब तपाईं यसलाई सम्भावित ग्राहकहरू बीच पार गर्नुहुन्छ। जब तपाईं किनमेल गर्नुहुन्छ Print Peppermint, तपाईं मुद्रण पक्ष, कोटिंग र तपाईंको प्रिन्ट अलग अलग बनाउन आवश्यक कुनै अन्य प्रभाव समावेश गरी धेरै विकल्पहरूमा पर्दा उठाइनेछ।
यी मुद्रण विकल्पहरू के हुन्? तिनीहरूमा स्पट यूवी, स्पट यूवी रेशम, अनकोटेड लिनेन, इनलाइन फॉइल, म्याट, रेशम टुक्राइएको, चमकदार यूभी र एक धेरै उच्च-गुणवत्ता १ 14 पीटी अनकोटेड स्टक पर्छ। तपाईंको संगठन वा व्यवसायको लागि प्रीमियम कार्डहरू सिर्जना गर्न यी विकल्पहरूबाट छनौट गर्नुहोस्।
अरू हामी कसरी तपाईंको सेवा गर्न सक्दछौं?
At Print Peppermint, हामी हाम्रो उत्पादनहरू मात्र हाम्रो ग्राहक सेवालाई पनि महत्त्व दिन्छौं। यदि तपाईंलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ वा केहि प्रश्न वा आरक्षण छ भने, हाम्रो टोली जहिले पनि प्रतिक्रिया दिन तयार छ। तपाईं तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ लाइभ कुराकानी बटनमा सोमवार देखि शुक्रवार बिहान am बिहान 8 र pm बेलुका EST बीच। तपाईं पनि प्राय: सोधिने प्रश्नहरूका लागि हाम्रो FAQ खण्ड हेर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो कस्टम कार्डहरूको लागि मुद्रण विकल्पहरू
तपाईंको पहिल्यै सामान्य डिजाइन, वा डिजाइन अवधारणा पहिले नै म्याप गरिएको छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। यदि तपाइँसँग तपाइँको चाहनाको कल्पना छैन भने पनि हामी यहाँ सँधै सहयोगी छौं! तपाइँले तलको विकल्प फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई सुरु गर्न मद्दत गर्दछ।
डिजाइन: यदि तपाईंसँग पहिल्यै डिजाइन छ भने त्यो उत्तम छ! तपाईको कार्ड अनलाइन प्रिन्ट गर्न यो धेरै सजिलो हुनेछ। जे होस्, तपाईंको फाईल सही सेट अप गरिएको छ र प्रिन्टको क्वालिटी शीर्ष-खाच छ भन्ने निश्चित गर्न तपाईंको कस्टम डिजाइन अपलोड गर्नु अघि फाईल सिफारिशहरू र कलाकृति पढ्न प्रयास गर्नुहोस्। यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईंले as.PDF फाईल बचत गर्नुहोस्, तर jpg, jpeg, tif, ai, वा tif राम्रोसँग बताईएको फन्टहरू सहित। याद गर्नुहोस्, हामी मद्दत गर्न सँधै खुशी हुन्छौं, त्यसैले तपाईं कुनै प्रश्न सोध्न वा तपाईंको चिन्ता व्यक्त गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आज हाम्रो साथ तपाईंको कस्टम ट्रेडिंग कार्डहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईं खुसी हुनुहुनेछ!
कुनै डिजाइन छैन: यदि तपाईको दिमागमा कुनै डिजाइन छैन भने वा तपाईलाई कसरी तपाईको कार्ड बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन! हामी ग्राफिक डिजाइन सेवाहरु पनि प्रदान गर्दछौं। हाम्रो डिजाइनरहरू एक उपयोगी र अनुकूलित कार्ड सिर्जना गर्न सक्दछ जुन कसैको ध्यान समेट्न र तपाईंको व्यवसायको लागि ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दछ।
अब तपाईं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको उचित र भर्खरका विवरणहरूको साथ ग्राफिक डिजाइन अनुरोध फार्म भर्नु हो, र हाम्रो ग्राफिक डिजाइनरहरू मध्ये एक तपाईंसँग सम्पर्क नगरीकन आउनेछ! यहाँ उनीहरूका भर्खरका कामहरू छन्।
टर्नअराउन्ड समय कति हो?
सामान्य टर्नआराउन्ड समयहरू १ देखि business व्यापार दिनहरूमा हुन्छन्, डिजाइन र समाप्तको प्रकारको आधारमा। केहि उत्पादनहरू भीड उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छन्, यो पनि आकार र समाप्तमा निर्भर गर्दछ। साथै, ध्यान दिनुहोस् कि हाम्रा सबै उत्पादनहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा डिजाइन गरिएको हो, त्यसोभए निश्चित हुनुहोस् कि तिनीहरू सम्भव उच्च गुणस्तरका छन्। यहाँ हाम्रो बदलाव समय को बारे मा अधिक।
के तपाइँ नयाँ व्यवसाय सुरू गर्दै हुनुहुन्छ? वा, एक पुरानोको पुनःब्र्यान्डिंग?
तपाइँको ब्रान्ड निर्माण गर्न मद्दतको लागि हाम्रो पुरस्कार-विजेता डिजाईन टीमलाई भाडामा लिनुहोस्।
हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ग्राफिक डिजाइन सेवाहरू समावेश:
लोगो डिजाइन सेवा
ब्यानर डिजाइन सेवा
का लागि ग्राहक समीक्षा Print Peppermint
समीक्षा संकलन गर्नुहोस्
अनुभव Print Peppermint